Hello Nepal News » एथ्लेटिको मड्रिडको रोमाञ्चक जितमा स्वारेज बने नायक !
एथ्लेटिको मड्रिडको रोमाञ्चक जितमा स्वारेज बने नायक !
स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडले ला लिगाअन्तर्गत नयाँ वर्ष २०२१ को पहिलो खेलमा रोमाञ्चक जित निकालेको छ । आज आइतबार राति भएको लिगको १५औं साताको खेलमा एथ्लेटिकोले १० खेलाडीमा सीमित अलाभेसलाई उसकै घरेलु मैदानमा १–२ ले स्तब्ध बनायो । एथ्लेटिकोलाई अवे मैदानमा जिताउन खेलको अन्तिम समय ९०औं मिनेटमा लुइस स्वारेजले विजयी गोल गरे ।
एथ्लेटिकोका लागि खेलको ४१औं मिनेटमा मार्कोस लोरेन्टोले पहिलो गोल गरेका थिए । उनले स्वारेजको पासमा गोल गरेका थिए । त्यसपछि घरेलु टोली अलाभेसका खेलाडी भिक्टोर सोझै रातो कार्ड पाएर मैदान छाडेपछि खेलमा एथ्लेटिको हाबी भएको थियो ।
यद्यपि, १० खेलाडीमा सीमित अलाभेस खेलको ८४औं मिनेटमा खेलमा फर्कियो । एथ्लेटिकोका फिलिपेले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि एथ्लेटिको बराबरीमा चित्त बुझाउने स्थितिमा पुगेको थियो । तर, ९०औं मिनेटमा सब्सिच्युट खेलाडी जुआओ फेलिक्सको क्रस पासमा स्वारेजले पोल नजिकैबाट बललाई जाली चुमाएपछि खेल एथ्लेटिकोले १–२ ले जित्यो ।
अब यो जितसँगै एथ्लेटिकोले लिगमा लगातार तेस्रो र पछिल्ला ५ खेलमध्ये चौथो जित निकालेको छ । ऊ अब १५ खेलबाट ३८ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा चढेको छ । १७ खेलबाट ३६ अंक बनाएको रियल मड्रिड दोस्रो स्थानमा झरेको छ । पराजित अलाभेस १८ अंकसहित १३औं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १९ पुष २०७७, आईतवार १७:२७